पहाडी भेगमा सापु महामारीको रूपमा देखा पर्ने गरेको छ
सङ्खुवासभा जिल्लामा पछिल्लो समय सापु रोगका बिरामी देखा पर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा तेजरत्न आँखा तथा कान उपचार केन्द्र खाँदबारीका इञ्चार्ज क्षितिज बरालसँग यस रोगको विषयमा गरिएको कुराकानीको अंशः
सापु भनेको के हो ?
सापु दृष्टिनाशक आँखाको रोग हो । यो रोग प्रायः नेपाली बालबालिकाहरूमा वि.सं. २०३२ (सन् १९७५) देखि देखा परेको छ । प्रायः भदौदेखि मंसिर महिनासम्म विशेषगरी नेपालको मध्य पहाडी भेगमा सापु महामारीको रूपमा देखा पर्ने गरेको छ । रोगको लक्षणहरू देखा परेको २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै उपचार हुन नपाए आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । सेतो पुतलीको झुसको कारण लाग्ने यो रोग पोखराबाट उत्पत्ति भएको चिकित्सकको दाबी छ । लामो अनुसन्धानपछि डाक्टर मदनकुमार उपाध्यायले यो रोगको नाम सापु दिएका हुन् ।
सेतो पुतलीका प्रजाति करीब ३ सय छन् । त्यसमध्ये एक प्रजातिको सेतो पुतलीमा शिरतिर तेर्सो र पखेटातिर ठाडो कालो धर्काे हुन्छ । यो उज्यालो वस्तु बत्ती, पर्दा, कपडा, झ्यालमा बढी आकर्षित हुने गर्छ । धेरैजसो पोथी सेतो पुतलीले अण्डा ढाक्न प्रयोग गर्ने झुसका कारण यो रोग फैलिने गरेको छ । सो पुतलीले अण्डा कोरल्ने समयमा झुस छाड्छ र त्यो झुस आँखामा प¥यो भने यो रोग लाग्ने खतरा हुन्छ ।
रोगको अन्य कारण के हो ?
हालसम्म सेतो पुतली (मोथ) नै सापु रोगको कारकको रूपमा जोडिने गरेको छ । तथापि कतिपय अवस्थामा भने सेतो पुतलीको संसर्गमा नआएका बिरामीहरूमा पनि यो रोग देखा परेको छ । साथै अन्य कारणहरूमा सुक्ष्म जीवाणु एवं विषाणुसमेत रहेको पाइएको छ । तर हालसम्म यो रोगको कारक यही नै हो भनेर यकिन भएको छैन ।
यस रोगका लक्षणहरू के के हुन् ?
– एक्कासी आँखा रातो हुनु ।
– चिप्रा नलाग्नु ।
– आँखाको दृष्टिमा तत्कालै कमी हुनु ।
– आँखाको दुखाइ सामान्य वा बढी हुनु ।
– उपचारमा ढिला भएमा कालो नानीमा सेतो देखिनु, आदि ।
यस रोगको उपचारविधि कस्तो छ ?
यो रोगको निदान तथा उपचार आँखा विभाग वा अस्पतालहरूमा मात्र गर्ने गरिन्छ । सापुको आकस्मिक उपचार सेवा आँखाभित्र औषधियुक्त सुई लगाएर तथा जटिल अवस्थामा आँखाको शल्यक्रिया समेत गरेर गर्ने गरिन्छ । समयमा नै उपचार भएमात्र आँखा निको हुन्छ । तर ढिलो हुन गएमा विरामिको दृष्टि गुम्न सक्छ वा आँखा सुकेर जान सक्छ ।
रोकथामका उपायहरू के के हुन् ?
– धेरै उज्यालो सेतो बत्ती नबाल्ने ।
– साँझमा र राती झ्यालढोका बन्द राख्ने ।
– सम्भव भएसम्म झ्यालको ढोकामा जाली हाल्ने ।
– सुत्ने कोठामा बत्ती निभाएर वा मधुरो बत्ती बालेर झुलभित्र मात्र सुत्ने ।
– रोगको लक्षण देखा परेमा वा रोगको शङ्का लागेमा तुरुन्तै आँखा उपचार केन्द्र वा अस्पताल जाने ।
– आफूखुशी कुनै पनि औषधी वा जडिबुटी प्रयोग नगर्ने ।
– आँखाको स्वस्थ्यकर्मीहरूको सल्लाहबमोजिम उपचार गर्ने ।
जिल्लामा हालसम्म यो रोगबाट कति सङ्क्रमित भएका छन् ?
सङ्खुवासभामा अहिलेसम्म ९ जनामा सापुको सङ्क्रमण देखिएको छ भने आठ जनाको समयमा नै उपचारको अभावले दृष्टि गुमिसकेको छ । एक जनाको भने समयमा नै उपचार भएर पुनः दृष्टि फर्किएको छ ।